इजि स्टफिंग रेसिपी - व्यंजनहरु
स्ट्रोबेरी पाइ रेसिपी फ्रिज गरिएको स्ट्रबेरी प्रयोग गर्दै
इटालियन ड्रेसिंगको साथ खोल पास्ता सलाद
कसरी ब्लेंडर बिना मिल्कशेक्स बनाउने
इजि स्टफिंग रेसिपी
यो इजि स्टफिंग रेसिपी कुनै पनि खानाको बारेमा पूरा हुनेछ! अजवाइन, प्याज र बटर सुकाइएको रोटी चौकोससँग टास्क गरिएको छ, त्यसपछि शोरबामा माथि राखिन्छ र तातो र सुनौलोसम्म बेक्ड हुन्छ।
मलाई गलत नबहकाउनुहोस् मलाई मन पर्छ मसलेको आलु , तर म सँधै आलुहरूमा घर भरेका लागि कोठा बचत गर्नेछु। म हरेक खानाको लागि स्टफिंग खान सक्दछु!
कसरी टर्की स्टफिंग बनाउने
स्टफिंग एउटा छुट्टी वा धन्यवाद स्प्रेडमा एक महत्वपूर्ण व्यंजन हो। यो सँगसँगै सेवा गर्नुहोस् हरियो सिमी कासरोल , मीठो आलु , टर्की, टर्की ग्रेभी (अवश्य), र नबिर्सनुहोस् को बारे मा कद्दू पाई मिठाईका लागि!
केहि स्टफिंग रेसिपीहरूमा गाजर, किसमिस वा सुकेका क्रनबेरीजस्ता चीजहरू समावेश हुन्छन्। जबकि यी सबै महान थप हुन सक्छ, केहि यो क्लासिक भराई नुस्खा तुलना!
कुखुरा सिसनिंग यो टर्की स्टफिंग रेसिपीको लागि उत्तम मसलाको मिश्रण हो (र यो कहिलेकाँही धन्यवादको समयमा बेच्न सकिन्छ)। यदि तपाईंले कुखुराको मसला प्रयोग गर्नुभएन भने, यो spषि, थाइम र रोजमेरी जस्तो मसलाको स्वादिष्ट मिश्रण हो र यसले सूप, स्टु र क्यासरोलहरूमा स्वादिष्ट स्वाद थप गर्दछ। तपाईं आफ्नै मसला प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ (वा बनाउनुहोस् घरेलु कुखुरा सिजननिंग ), मलाई लाग्छ कि ageषि भरिपूर्ण मसाला हो।
कसरी स्टफिंग बनाउने
स्क्र्याचबाट राम्रो क्लासिकको लागि ट्रिकले तपाईंको रोटी साँच्चै सुक्खा छ भनि सुनिश्चित गर्दैछ तपाईंले श्रोथ थप्नु अघि। यदि तपाईं केही दिन चाँडै आफ्नो रोटी किन्नुहुन्छ, यसलाई फाँट्नुहोस् वा यसलाई चौकोमा काट्नुहोस् र त्यसलाई तपाईंको काउन्टरमा केही दिनको लागि कचौरामा सुकाउनुहोस्। कुनै पनि प्रकारको रोटीले गर्दछ, म प्राय: खैरो र सेतोको कम्बो प्रयोग गर्दछु।
चुटकीमा, म यसलाई भट्टीमा ताजा ब्रेड क्युब्सलाई °०० डिग्री फारेनहाइटमा सुकाउन चाहन्छु, यसलाई लगभग १० मिनेटसम्म सुकाउन (भूरा / टोस्ट गर्न निश्चित हुनुहुन्न)! यदि तपाईं ओभनमा ताजा रोटी सुकाउनुहुन्छ भने, तपाईंलाई त्यस्तै शोरबाको आवश्यक पर्दैन।
म मेरो सामानहरू क्यासरोल डिशमा पकाउन रुचाउँछु (जुन प्राविधिक रूपमा यसलाई ड्रेसिंग बनाउँदछ) वा बनाउन क्रक पॉट स्टफिंग । टर्की पकाउँदा र स्टफिंग छुट्टै पनी सुनिश्चित गर्दछ कि ती दुवै दुबैलाई ठीक तापमानमा पुग्छ बिना अत्यधिक पकाउन।
स्टफिंग समय भन्दा पहिले बनाइन्छ र फ्रिजमा क्यासरोल डिशमा भण्डार गर्न सकिन्छ। यदि टर्की भरीरहेको छ भने भरि room कोठाको तापक्रम वा शीतल हुनुपर्दछ र टर्कीमा भुननु भन्दा पहिले भरिनु हुँदैन।
यदि तपाईं आफ्नो टर्की सामान गर्नुहुन्छ भने, सामानहरू पूर्ण रूपमा शान्त गर्न सम्झनुहोस्। यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, चरा असुरक्षित खाना पकाउने तापमानमा लामो समय सम्म बस्नेछ। यदि टर्की भरीरहेको छ भने, भरि theको केन्द्र 165 ° F मा पकाउनु पर्छ किनभने चराबाट झर्ने चीजहरू स्टफिंगमा प्रवेश गर्छन्।
स्टफिंग एक राम्रो पक्ष हो किनकि यसलाई सजिलैसँग अगाडि बनाउन सकिन्छ! निर्देशितको रूपमा मात्र तयारी गर्नुहोस्, कडाईमा कभर गर्नुहोस् र rige 48 घण्टासम्म फ्रिज गर्नुहोस्।
बेकिंग गर्नका लागि, यसलाई फ्रिजबाट बेकिंग कम्तिमा minutes० मिनेट अघि हटाउनुहोस्। निर्देशितको रूपमा तयारी गर्नुहोस् (यदि तपाईं फ्रिजबाट अझै चिसो हुनुहुन्छ भने तपाईंले केही मिनेट थप्न आवश्यक पर्दछ)।
कसरी स्टफिंग फ्रीज गर्ने
सबैजना टर्की डिनर बचेका चीज मन पराउँछन्। टर्की डिनर स्ट्याक्स वा तातो टर्की स्यान्डविच उनीहरूको मजा लिने मेरो व्यक्तिगत मनपर्दो तरिकाहरू हुन्, तर कहिलेकाँही उनीहरू तिनीहरूमा खराब हुँदै जान्छन् भनेर तपाई उनीहरूमा पुग्न सक्नुहुन्न। नडराऊ, किनभने टर्कीले भरिएको सामान राम्रोसँग स्थिर हुन्छ! यसलाई फ्रिजरमा मात्र पप गर्नुहोस् र यो धेरै महिनासम्म रहनेछ।
स्टिफिंग पुनः गरम गर्न, यसलाई ओभरमा pop 350० डिग्री फारेनहाइटमा पप गर्नुहोस् यसमा थोरै ब्रोथको साथ २० मिनेट यसमा सुकाउन नदिन।
99.99बाट9 75भोट समीक्षारेसिपी
तयारी समयपन्ध्र मिनेट कुक समय। 55 मिनेट कुल समय१ घण्टा १० मिनेट सर्भिंगहरू१२ सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यस क्लासिक भरी नुस्खा कुनै पनि खाना को बारेमा पूरा हुनेछ! अजवाइन, प्याज र बटर सुकाइएको रोटी चौकोससँग टास्क गरिएको छ, त्यसपछि शोरबामा माथि राखिन्छ र तातो र सुनौलोसम्म बेक्ड हुन्छ। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢दुई सानो प्याज पासा
▢। डाँठ अजवाइन पासा
▢१ ½ चम्मच कुखुरा सिलि। वा as चम्मच भूमि सेज
▢नुन स्वाद को लागी
▢१२ कप रोटी चौकोस
▢.- कप कुखुराको ब्रोथ
▢दुई चम्मच ताजा अजमोद
▢१ चम्चा ताजा जडिबुटी ,षि, थाइम, रोजमेरी
मध्यम तातोमा ठूलो स्किलेटमा माखन पग्लनुहोस्। प्याज, अजवाइन र कुखुरा मसला (र रोमेरी प्रयोग गर्दैमा) थप्नुहोस्। मध्यम-कममा निविदा नभएसम्म कुकनुहोस् (खैरो नगर्नुहोस्), लगभग १०-१२ मिनेटहरू।
ठूलो कचौरामा रोटी क्युब्स राख्नुहोस्। प्याज मिश्रण, अजमोद र नयाँ जडीबुटीहरू जोड्नुहोस्।
क्यूब्स नमी नभएसम्म ब्रोथ ओभरटपमा राख्नुहोस् (तर सुग्गी होइन) र बिस्तारि टस गर्नुहोस्। तपाईंलाई सबै श्रोताको आवश्यकता पर्दैन। नुन र कालो मिर्च स्वाद को लागी मौसम।
मिश्रणलाई सेवा गर्ने डिशमा राख्नुहोस्, थप माखन र कभरको साथ थोप्लो।
Ake 35 मिनेट बेक गर्नुहोस्, फेला पार्नुहोस् र थप १० मिनेट बेक गर्नुहोस्।
जडिबुटीहरूमा रोझमेरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने प्याज / अजवाइनको साथमा पकाउनुहोस्। टर्की सामान गर्नको लागि, सामानहरू कम्तीमा the 45 मिनेटमा फ्रिजमा पूर्ण रूपमा चिस्याउनुपर्दछ। अगाडि बढाउन: निर्देशितको रूपमा तयारी गर्नुहोस्, कडाईमा कभर गर्नुहोस् र rige 48 घण्टासम्म फ्रिज गर्नुहोस्। पकाउनको लागि, बेकिंग कम्तिमा minutes० मिनेट पहिले फ्रिजबाट हटाउनुहोस्। निर्देशितको रूपमा तयारी गर्नुहोस् (यदि तपाईंले फ्रिजबाट अझै चिसो छ भने तपाईंले केही मिनेट थप्न आवश्यक पर्दछ)।
क्यालोरिज:१। 185,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:3g,मोटो:एघारg,पागलिएको बोसो:6g,कोलेस्ट्रॉल:२मिलीग्राम,सोडियम:462मिलीग्राम,पोटासियम:१55मिलीग्राम,फाइबर:१g,चिनी:दुईg,भिटामिन ए:5 435IU,भिटामिन सी:8.8मिलीग्राम,क्यालसियम:१मिलीग्राम,फलाम:१.4मिलीग्राम
कीवर्डटर्की भराई नुस्खा कोर्सबेलुकाको खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
यस सुपर स्टफिंग रेसिपीनलाई पुनःप्रशोधन गर्नुहोस्